Noocyada Labiska Labiska Ugu Fiican - Talooyinka Dharka | Ragga Caqliga leh
Alicia tomero | | Calzado, Dhameystirka, fashion, Isbeddellada
Waxaan qaybtan u hibeyn doonaa noocyada dharka ugu fiican, kuwa inta badan abuura isbeddel ka dhex dhaca ninka xarragoonaya taasina waxay u taagan tahay qaabkooda. Kama hadli karno qiimo jaban, tan iyo waa naqshado gaar ah, oo leh marada ugu fiican oo loo abuuray si ay u yeeshaan qaab u gaar ah.
Noocyadaas calaamadee ka hor iyo ka dib moodadaWaad ku mahadsan tahay iyaga, qaabka loo labbisto xilligaas oo asalkiisu ka soo jeedo iyo inay iyagu abuureen u gaar u gaar ah. In kasta oo aan sidoo kale ugu dambayn dib u eegi doonno qaar ka mid ah kuwa ugu caansan uguna sahlan in la iibsado noocyada dharka ragga. Ma xoojin doonno tilmaantooda, laakiin waxay noqon doonaan astaamaha ka jaban dhammaan jeebabka iyo kuwa ugu caansan ka mid ah fashionistas dhallinyarada.
1 Noocyada dharka ragga ee ugu fiican
1.7 Noocyo kale oo leh sharaf weyn
Noocyadaasi waxay leeyihiin wax u gaar ah. Sida aan dib u eegnay waxay yihiin kuwo gaar ah, mid walba leh qaab gaar ah, dhalinyarada iyo waayeelkaba. In kasta oo ay kaga duwan yihiin magacyada kale ee maalinlaha ah, waa sababta oo ah waxay leeyihiin abuuritaankiisa haute couture iyo raaxo waxayna u taagan yihiin maxaa yeelay mar walba waxay safka hore kaga jiraan. Dhammaantood waxay leeyihiin nashqado kala duwan, laga soo bilaabo funaanado aasaasi ah, suudh dhar, surwaal iyo xitaa nigis.
Calaamadan waxaa abuuray Mario Prada, oo ah naqshadeeye moodada raaxada Talyaaniga. Qaabkiisu waa mid gaar ah tan iyo ma jecla inuu raaco hab -maamuuska moodada caadiga ah, halkii, wuxuu isku soo celin doonaa qaabkiisa shaqsiyeed. Wuxuu leeyahay sumcad weyn oo adduunka ah taasna wuu kasbaday mahadsanid tayadeeda iyo qaabka loo abuuro naqshado lacag la’aan ah, ee ragga xorta ah. Waxa kale oo ay samaysaa qalabka moodada sida kabaha, bacaha maqaarka, iyo xataa cadarrada.
Waa mid kale oo ka mid ah sumadaha raaxada ee fadhigoodu yahay Florence, Italy. Waxay dhalatay 1921 -kii tan iyo markaasna ma aysan joojin koritaankeeda iyada oo ay uga mahadcelinayaan raaxaysigeeda iyo abuuritaankeedii asalka ahaa. Moodooyinkooda ayaa si weyn loogu dayday asalnimadooda, iyo alaabadooda waxay u yihiin qaab ka baxsan iyo qalab raaxo leh. Waxa ugu habboon naqshaddiisa waa maqaallo maqaar ah, oo had iyo jeer hal -abuur leh si ay ula qabsadaan qarniga cusub ee XNUMXaad.
Waxay ku jirtaa jagooyinka koowaad ee liisaska moodada. Xaqiiqdii waa a naqshadeynta hormuudka u ah tayada iyo naqshadeynta. Qiimaheedu aad buu uga jaban yahay noocyada qaarkood wuxuuna ragga siiyaa qalabyo kala duwan oo aad u kala duwan, dhar iyo waliba udug. Noociisii ​​ugu fiicnaa wuxuu la joogay "Polos" caanka ah, isagoo ah eraygiisa u gaarka ah oo macnaha u siinaya dharkan, si aan caadi ahayn oo had iyo jeer qumman.
Saxiixiisu wuxuu yimid intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, 1924, halkaas oo uu markii ugu horreysay ku takhasusay dharka. Waxay bixisaa dhar aan caadi ahayn, tan iyo wuxuu u taagan yahay khadka isboortiga oo leh taabasho aan rasmi ahayn, laakiin sidoo kale waxay leedahay nuqulkeedii Isticmaalayo. Dhar si xarrago leh loo qaabeeyey ayaa loogu talagalay ganacsatada, lehna qaab iyo shakhsiyad. Ma ilaawi karno iyaga udugga caadiga ah, qaar badan oo ka mid ah oo leh udgoon gaar ah, gaar ah oo dabeecad leh.
Astaanta Fashion -ka oo uu sameeyay Pierre Bergé sannadkii 1961. Waa asal Faransiis ah waana mid ka mid ah sumcadaha ugu sharafta badan adduunka. Wuxuu adeegsadaa qaabka casriga ah iyo kan caadiga ah inta badan moodooyinkiisa, Waxay sidoo kale calaamadisaa dabeecaddeeda, had iyo jeer leh nooc ka mid ah astaamaha u taagan qaabkeeda. Waxay si fiican u xoojinaysaa dhallinta, oo leh noocyadiisa caasiyiinta ah iyo laanta punk, laakiin raaxo. In kasta oo ay sidoo kale leedahay xariiqdeeda qaab caadi ah oo xarrago leh oo da 'kasta leh.
Isagu waa abuuraha weyn ee moodada ragga, oo si gaar ah loogu talagalay kor loogu qaado kartida xarrago leh ee nin Ma rabtaa inaad ogaato waxa ugu muuqda? Summaddu waxay kasbatay qayb ka mid ah sumcadeedii samaynta shandadaha iyo boorsooyinka tayada sare leh. Waxay kaloo muujiyaan bacaha ugu fiican, kabaha, qalabka sida dahabka iyo wax kasta oo lagu sameeyay maqaar tayo wanaagsan leh.
Noocyo kale oo leh sharaf weyn
Ma awoodno inaan tilmaamno dhammaan noocyada ugu wanaagsan ee raaxada ee ka jira suuqa. Runtii waxaan ka tagnay qaar aan dib u eegno, laakiin halkan waxaa ah magacyo isku mid ah: Berluti, Dior, Giorgio Armani, Tom Ford, Burberry, Calvin Klein, Paul Smith, Brioni, Hermes… Shaki kuma jiro inay ugu fiican yihiin, qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa la yaqaanay dhowr iyo toban sano waxayna ahaayeen loo aqoonsaday qaabkooda, raaxada iyo tayada sare.
Shaki la'aan, waxaa jira infinity iyo noocyo kala duwan oo loogu talagalay dharka ragga. Kuwa aan dib u eegnay ayaa ah kuwa ugu muhiimsan oo ka dhex muuqda kuwa ugu wanaagsan suuqa raaxada. Si kastaba ha ahaatee, waxaan leenahay noocyada ugu fiican ee suuqa, leh dhar tayo sare leh oo dhexdhexaad ah qiimayaal aad u jaban.
Iyaga dhexdooda ayaan ka heli karnaa Levi's, Pepe Jeans, Tommy Hilfiger ama Wrangler. Dhanka kale, waxaa jira franchises leh naqshado laga abuuray moodada ugu fiican iyo ku dayashada sumadaha ugu fiican. Waxay sidoo kale u taagan yihiin iibkooda weyn iyagoo uga mahadcelinaya fududeynta lacag -bixinta iyo xayeysiinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Noocyada dharka ragga ee ugu fiican
Sida loo noqdo nin xarrago leh